चाडपर्व ढिला गराउने मलमास असोज २ गतेदेखि, के गर्ने ? के नगर्ने ? – Rapti Khabar
एउटा औंसीदेखि अर्को औंसीसम्म संक्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास भनिन्छ । महिनामा २ वटा संक्रान्ति पर्‍यो भने क्षयमास भनिन्छ । ज्योतिषका विद्वान् भास्कराचार्यले आफ्नो ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिमा मलमास र क्षयमासको स्पष्ट परिभाषा दिएका छन् ।